म प्रधानमन्‍त्री हुनुपर्छ –वामदेव गाैतम – Paluwa Khabar
कार्तिक १३, २०७७ बिहिबार 24
नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमलाई एक हक्की र निडर स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छ। आफ्ना कतिपय विचार र अडानका कारण उहाँको जीवनमा राजनीतिक उकालीओराली सामान्य साबित भइसकेका छन्। पार्टी एकता वा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षका विभिन्न मोडमा नेता गौतमको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। सरकार वा पार्टीको काममा सधैँ शक्तिशाली भूमिकामा देखिने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं प्रस्तावित उपाध्यक्ष गौतमसँग प्रकाश सिलवाल, रमेश लम्साल र शरद शर्माले गरेको संवादको सम्पादित अंश
मुलुकमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ, नेकपाले संस्थागतरुपमा यसको समीक्षा पनि शुरु गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्याकङ्नमा नेकपाले विगतका कतिपय स्थान गुमाएको छ, तपाईंले उपनिर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
-यो उपनिर्वाचनमा समग्रमा हामीले सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ तर परिणामबाट हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामीले विगतमा जितेकामध्ये महत्वपूर्ण केही स्थान जोगाउन सकेनौँ। भक्तपुरको एक प्रदेशसभा सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र चितवनको एक वडाध्यक्ष पद गुमाएका छौँ। विगतमा हामीले गठनबन्धन गरेर चौतर्फीरुपमा विजय हासिल गरेको चितवन जिल्ला, जहाँ हाम्रो पार्टीका एक अध्यक्षको गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ गुमाएका छौँ। अर्घाखाँची र दाङमा पनि केही स्थान गुमेका छन्। पार्टीको यही मङ्सिर १८ गतेको सचिवालय बैठकले समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ, त्यो प्राप्त भएपछि मङ्सिर २३ गतेका लागि तय भएको बैठकमा यसबारे छलफल शुरु हुनेछ।
– यो कुरा पनि हो कि पार्टी एकतापछि हाम्रो सङ्गठन तल्लो तहसम्म गएकै छैन र ग्रासरुट त हाम्रो तलै छ। जहाँ, जोजो समर्थक वा कार्यकर्ता थिए, ती त्यहीँ छन्। कमिटीमा मात्रै नभएको हो मान्छे त त्यहीँ छन्। मत कमिटीले हाल्ने होइन, बालिग मताधिकारले मत दिएका हुन्। त्यही भनेर बस्ने हो भने त समीक्षा नै गर्न पर्दैन। आखिर हामीले किन उपनिर्वाचनमा पहिलाको जस्तो स्थान ल्याउन सकेनौँ ? यी सबै पक्षमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो गुम्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, हामी सचेत हुनैपर्छ।
Prevधानबारिमा भेटियाेे ड्राईभिङ लाईसेन्स
Nextन’रभक्क्षि बाघ नि’यनत्रणमा लिन काग्रेस नेता पाण्डेकाे माग
को हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हत्या गर्ने धम्की दिने ?
बर्दियामा फेरि दु:ख’द दु’ र्घटना